Åkesson oo Islaamka la barbar dhigay kacaankii Naziga | Somaliska
Gudoomiyaha xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) Jimmie Åkesson ayaa qudbadii xagaaga ee uu u jeediyay shacabka Sweden waxa uu weerar ku qaaday Islaamka. Åkesson ayaa diinta Islaamka la barbardhigay kacaankii Naziga iyo hantiwadaaga.
Åkesson oo la hadlayay dhowr boqol oo ka tirsan taageerayaasha xisbiga SD isagoo ku sugan tuuladii uu ku dhashay ee Sölvesborg ee gobolka Blekinge ayaa qudbadiisa inta badan kaga hadlay arimaha la xiriira soo galootiga iyo Islaamka, taasoo ah arinta ugu muhiimsan ee xisbigiisa ay ku doorasho galayaan.
“Islaamisim waa naziga iyo kommunistiga waqtigeena” ayuu yiri Åkesson isagoo ay u sacbinayaan taageerayaashiisa. Waxa uu intaas ku daray in uu doonayo in la joojiyo taageerada la siiyo jaaliyadaha taageera waxa uu ugu yeeray Islaamism. Isagoo intaas ku daray in dhalinyarada haysata baasaboorka Swedishka ee u safray Syria aysan ku soo noqon karin Sweden.
Ma ahan markii ugu horeysay ee Åkesson uu islaamka la barbar dhigo kacaankii Naziga ee uu hogaamin jiray Hitler. Åkesson iyo xisbigiisa ayaa naceybka Islaamka iyo Muslimiinta ka dhigtay arinta ugu muhiimsan ee xisbigiisa uu doorashada ku galayo bisha soo socota.
Åkesson ma aha wadani dhab ah oo sveriga u dhashay waayo dadka wadaniga ah ma abuuraan dhibaato taas ayaa kuu cadaynaysa in ujna ahayn qof wadanka u dhashay hadii aan la kulmi lahaana waan u sheegi lahaa waad mahadsantihiin